Sawirkii ugu horreeyay ee filimka Dilaaga Dayaxa Ubaxa ee Martin Scorsese | Waxaan ka socdaa mac
- Martin Scorsese mashruuca xiga, Dilaaga Dayaxa Ubaxa, wuxuu si gaar ah uga soo muuqan doonaa TV-ga Apple +, ka dib markii shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino ay heshiis la gashay Scorsese iyo shirkadda wax soo saarka Leonardo DiCaprio. Marka jilayaasha la dhammeeyo oo doorka dib loo qoondeeyo, duubista filimka ayaa bilaabmay oo waxaan horey u haynaa sawirka ugu horeeya.
Kadib in kabadan sanad diyaarin, warkii ugu horeeyay ee filimkaan waa laga bilaabo Maarso 2020, ugu dambeyn waan helnay sawirka koowaad ee filimkan cusub ee Scorsese, sawir muujinaya Leonardo DiCaprio sida Ernest Burkhart iyo Lily Gladstone oo ah xaaskiisa, Mollie.
#DilaagaOfTheFlowerMoon @ObsageNews https://t.co/L9gY0cmR7x pic.twitter.com/Mpmo7jB64l
- Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) Waxaa laga yaabaa 10, 2021
Sawirkaan waxaa wadaagay DiCaprio isagoo adeegsanaya bartiisa Twitter-ka (Via Wararka Osage). Lily gladstone ayaa ku soo biiray jilayaasha filimka bishii Febraayo ee la soo dhaafay, oo ay weheliso Jesse khaladaad isagoo ah sarkaal FBI ah ayaa baaritaanka fulin doona dilkii maalqabeenada Osage Hindida.
Filimkan, oo lagu daro agaasimaha, Scorsese sidoo kale waa soo saare fuliya, waa iyada oo ku saleysan buugga magaca aan la aqoon ee uu qoray qoraaga David Grann. Marka laga soo tago Leonardo DiCaprio, mid kale oo ka mid ah xiddigaha waaweyn ee Hollywood ee ka soo muuqanaya filimkan cusub waa Robert DeNiro.
Dilaaga Dayaxa Ubaxa waxaa la dejiyay 1920, xafiiska cusub ee FBI-da ee Baarista (FBI) waa baaritaanka dilkii maalqabeenadii Osage Hindida kuwa la siiyay xuquuq kiro ah shidaalka laga helay dhulkooda.
Wali waa xilli hore in la ogaado muxuu noqon karaa taariikhda uu soo baxayo filimkan cusubSi kastaba ha noqotee, waxay u badan tahay inay gaari doonto shineemo iyo Apple TV + kahor dhamaadka sanadka si loogu tartamo Oscars of the Academy of Hollywood sanadka soo socda, kaasoo noqon doona daabacaadii 94-aad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Sawirkii ugu horreeyay ee laga soo qaaday dilkii Martin Scorsese ee filimka Ubaxa Dayaxa
Apple Waxay Shaqaaleyneysaa Agaasimihii Hore ee Xayeysiiska Facebook Si Loo Adkeeyo Ganacsiga Xayeysiinta